Fahalalàn-jaza > 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (sampan-tsifin'ny Chemical Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4
Ny fananana ara-batana sy ara-tsimiao 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Ny 2-Chloro-5 methylpyrimidine dia manana endri-tsoratry ny kiran-kiran-jiro mavo matevina amin'ny efi-trano. Ny sasany dia mamaritra ny aloky ny loko toy ny tsy fotsy. Tsy misy fofona sy molekiolan'ny volon-koditra 128.56 isaky ny molotra. Ny fehezanteny momba ny simika dia voamarina amin'ny C5H5CIN2 sy ny rafi-dalan'ny fangalana molekiola (SMILES) toy ny CC1 = CN = C (CL) N = C1. Ny votoatiny dia misy teboka miovaova eo anelanelan'ny 89-92 degrees centigrade, ary ny tebitebin'ny 239 .2 degrees amin'ny 750mm / hg. Ny solon-javatra dia vitsy tsy voapetraka ao anaty rano. Amin'ny ankapobeny dia manamboatra sy mivarotra azy amin'ny faritry ny pharmaceutique miaraka amin'ny fandinihana (madio madio) eo anelanelan'ny 97% sy 98%, izay ambany indrindra amin'ny 95%. Ny hatevin'ny molekely tokana 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) dia eo ho eo amin'ny grama 1.169 isaky ny molotra amin'ny 25 degrees centigrade. Ny enthalpy ny fanindronana dia 45.68 KJ / mol ary ny tsindry amin'ny vata dia isaina amin'ny 0.0626 mmHg eo amin'ny 25 degrees Celsius. Ny singa fototra ampiasaina ho an'ny 2-chlor-5-methylprimidine dia: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 2-chloro-5-methyl- (8Cl, 9Cl) ary 5-methyl-2-chloropyrimidine.
Fanomanana ny 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
Ny 2- chlor-5 methylpyrimidine dia azo ampiasaina amin'ny fomba maro. Ny fampiharana iombonana amin'ny fanomanana dia ny mahazo izany amin'ny 25% amin'ny vokatra vokatry ny fihetsik'ilay oxychloride phosphorus sy 3- methylpyridine 1-oxide. Na izany aza, mba hahazoana rendrenda ambony kokoa, 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) dia mety homanina amin'ny fanoherana ny oxychloride phosphor amin'ny 3-methylpyridine 1-Oxide. Ny fanatsarana dia midika ho fanatanterahana ny fanehoan-javatra miaraka amin'ny fitambaran'antona fototra ao organika ary ny fanangonana (solon-tsolika tsy azo ampiasaina) izay tanterahana amin'ny hafanana eo anelanelan'ny -50 sy + 50 degrees Celsius. Ny famoahana na dia hatramin'ny 70% aza dia azo raisina amin'ny fomba samihafa. Ny tombam-bidy ara-tsosialy momba ny 96% dia voarakitra an-tsoratra ihany koa, na dia misy aza ny fatiantoka dia voaporofo fa sarotra ny miampita, ary mamono olona, ​​indrindra fa amin'ny ankapobeny. Ny safidy amin'ny fomba fiomanana fanomanana dia mety hisy fiantraikany amin'ny habetsahariny izay te-hamokatra sy hamaha ny fisarahana amin'ny hafa amin'ny vokatra. Na izany aza, arakaraka ny fampiasanao farany ny vokatra, dia azonao atao foana ny mijery ny dingana ampiasaina amin'ny fiomanana, na mifantina ny fomba mety tianao hampiasaina raha toa ianao ka manatanteraka ny fanomanana anao.
Inona marina ny Pyramidina?
Raha tsorina dia izy ireo dia aritra aritra miaraka amin'ny atôma Carbon sy nitrogen ao anaty peratra enina. Ny peratra dia miorina tsara. Ny endriky ny Pyramidine, dia manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny zava-mahadomelina ho an'ny tenany manokana na amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Efa nampiasaina izy ireo, ary mbola ampiasaina amin'ny karazam-panafody isan-karazany, anisan'izany ny zava-mahadomelina amin'ny fitsaboana ny tosidra, ny fitsaboana ny areti-mifindra, ny fanafody amin'ny ankapobeny, ny fanafody malarialista ary ny fampiharana ny VIH. . Ny fifantohantsika amin'ity lahatsoratra ity dia amin'ny 2-chloro-5 methylpyramidine ary ny fampiasana azy ho toy ny intermediate
Fampiasana sy fampiharana 2-Chloro-5-methylpyramidine
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny famandrihana organika; matetika ampiasaina amin'ny pestisid intermediate, toy ny acetamiprid, imidacloprid, toy ny herbicide sy bactericide. Ankoatra izany, dia ampiasaina ho toy ny pharmaceutique intermediate, catalytic agents ary ny fanampiny additives. 2-Chloro-5-methylpyramidine dia nampiasaina tamin'ny fananganana tohana neonicotinoid vaovao izay misy ny fanavakavahana. Ny fampiasana hafa ao amin'ny famandrihan-tsakafo Agro dia ahitana ny fanaovana: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Ireo dia nanaporofo ny fahombiazan'ny toeram-pambolena sy toeram-pambolena indostrialy hanimba ireo bibikely manimba ny voankazo, legioma na voankazo.
Ny singa simika hafa azo ampiasaina ao amin'ny 2-Chloro-5 methylpyramidine dia ny hoe:
Ny 2-Chloro-5 methylpyramidine dia fantatra fa marefo ara-pahasalamana rehefa voatahiry ao anatin'ny fepetra faratampony: amin'ny hafanana amin'ny efitra. Aza manandrana mampiasa alimentera na vovo-javaboahary, satria ny votoatiny dia hihetsika amin'ireny mba hamokarana gazy misy rano, izay mety hamolavola amin'ny rivotra amin'ny farany. Ataovy azo antoka fa manamarina matetika ireo boaty ianao mba hahitana azy ireo ary handrotsaka ny fandehanana any am-piandohana.
Noho ny faharetany sy ny tsy fisian'ny hazandrano, ny 2- chloro-5-methylpyramidine dia azo entina amin'ny rivotra na ny ranomasina. Tena manakorontana amin'ny oksida, oksida, ary oksika oksida izy io, noho izany dia ilaina ny mifidy ny safidy fitateram-batana na ny tahirin-tsakafo tsy misy ifandraisany amin'ny iray amin'ireny. Tokony hikatona mafy ny vata fampangatsiahana, ao anaty toerana mafana sy mangatsiaka tsara
Ny fiarovana tsara, ny fepetra fisorohana, ny fandroahana ary ny firehetana miady
Alamino toy ny fiarovan-tratra simika sy fiarovana amin'ny alàlan'ny fiarovan-tena foana rehefa mikarakara 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) mba hisorohana ny fifandraisana amin'ny maso na hoditra. Aza manaikitra ny zavona, ny dipoavatra na ny gazy: Ampiasao mandrakariva ao anaty toerana feno ventilated. Ny fitsaboana tsy tapaka dia voaporofo fa misy fiantraikany amin'ny fahasalamana. Tahaka ny mahazatra, miezaha hampihatra ny fahadiovan'ny orinasa sy ny fiarovana.
Na izany aza, Raha sendra tsy mitelina: Sasao amin'ny rano ny vavany ary diniho ny dokotera iray. Raha ny voka-dronono: Avelao any amin'ny rivotra madio ny olona voan'ny aretina ary raha tsy mifoka rivotra izy ireo, dia alefaso ny fanafody ateraky ny aretin-koditra, ary mandehana any amin'ny dokotera. Ho an'ny tsy fahampian'ny hoditra, aroso amin'ny rano sy rano mandritra ny dimy minitra farafahakeliny ny faritra voakasika, ary esory izay akanjo na kiraro maloto. Ny 2-chlor-5-methylpyrimidine dia afaka mandoro ny hoditra na mahatonga ny fahatsapana. Mandehana manatona mpitsabo iray.
Ny 2-chloro-5- methyl pyrimidine dia tokony hesorina ho fako manokana. Midika izany fa ilaina ny fametrahana fandaharana manokana, amin'ny fampiasana orinasam-panafahanana licence miaraka amin'ny fandefasanao ny fandefasam-bary eto an-toerana mba hahazoana antoka ny fanarahan-dalàna ny lalàna nasionaly sy isam-paritra. Ny fitambaran-trano dia tsy tokony hafahana ao anaty rano, ary raha sendra mandalo ny grenady, dia mamerina ao anaty vilia voajanahary ary mametraka araka ny tokony ho izy.
Hamono afo vokatry ny 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) Ny fampielezan-kevitra dia azo ampiasaina amin'ny famonoana afo ara-pahasalamana, ny karbona (IV), ny sandan'ny polymitra na ny toeram-pivoahana amin'ny alàlan'ny alikaola. Raha ilaina, dia tokony hitafy fitaovam-piadiana fiarovana sy fitaovan'ny rivotra ny olona iray mba hampihenana ny mety ho fandoroana.
Raha ny mikasika ny soatoavina fetran'ny fitrandrahana, ny 2-chloro-5-methylpyramid dia tsy manana fetra toy izany. Ny fepetra ankapobeny toy ny kapila simika ho an'ny injeniera dia atolotra mandritra ny fikarakarana.
Manaraka Next post: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vovoka spiro